फिडेल क्याष्ट्रोका जेठा छोराद्वारा आत्महत्या - Left Review Online
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइन २०७४ माघ २० गते शनिवार
काठमाडौँ । समाजवादी गणतन्त्र क्युवाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्याष्ट्रो रुजका जेठा छोरा डा. फिडेल क्याष्ट्रो डियाज बालार्टले बिहिबार बिहान आत्महत्या गरे ।
क्युवाका साथै दक्षिण अमेरिकामा ‘फिडेलिटो’ अर्थात ‘सानो फिडेल’ नामले चर्चित र क्युवाका सबै पुस्ताका मानिसहरु बिच अत्यन्तै लोकप्रिय डा. क्याष्ट्रो अाफ्ना पिता तथा पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्याष्ट्रो रुजको निधनपश्चात लामो समयदेखि डिप्रेसनको शिकार भइ उपचार गराइरहेका थिए । केही समय अस्पतालमै रहेर उपचार गराई घर फर्केका र निरन्तर चिकित्सकहरुको परामर्शमा रहेका डा. क्याष्ट्रोले बिहिबार बिहान आत्महत्या गरेको कुरा क्युवाको सरकारी समाचार संस्था एसिएनले जनाएको छ ।
उनी ६८ वर्षका थिए । विज्ञान विषयमा विद्यावारिधी हासिल गरेका उनी क्युवाको राज्य सभाका वैज्ञानिक सल्लाहकार र क्युवा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षको रुपमा कार्यरत थिए ।
उनी आफ्नो जीवनकाल भरी विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा समर्पित भएर लागेका थिए । क्युवामा दशकौँदेखिको अमेरिकी नाकावन्दीलाई असफल बनाउँदै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई विकसित गराउन र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल हुनुमा उनको अत्यन्तै ठूलो योगदान रहेको छ । त्यसका लागि उनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत ख्याति प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
उनको अन्त्यष्टिबारे कुनै कुरा सार्वजनिक नगरिएको भए पनि त्यसको प्रबन्ध उनको परिवारले गर्ने एसिएनले जनाएको छ ।
पछिल्लाे - एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रचण्डपथ अपनाउने ।
अघिल्लाे - माघ महिनाभित्र एकताका धेरै कुरा टुँगिने – अध्यक्ष प्रचण्ड